Tababare Solskjær oo u arka in Pogba uu noqon doono kabtanka kooxda Manchester United ee mustaqbalka – Gool FM
Tababare Solskjær oo u arka in Pogba uu noqon doono kabtanka kooxda Manchester United ee mustaqbalka
(Manchester) 25 Jan 2019.Tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjær ayaa aaminsan in Pogba uu noqon doono kabtanka Red Devils ee mustaqbalka, sababa la xiriira sifooyinka badan uu ku raaxeysanayo.
25 jirkan ayaa soo xirtay calaamada kabtanimo ee kooxda Manchester United saddex kulan kadib markii uu dhaawacmay Antonio Valencia, balse Jose Mourinho ayaa go’aansaday inuu ka qaado bishii September ee lasoo dhaafay.
Laakiin tababare Solskjær ayaa sheegay:
“Horey ayaan u aqaanay wiilkan, xaqiiqda waxa uu leeyahay tayada hogaaminta ama kabtanimada”.
“Pogba wuxuu awood u leeyahay inuu sameyn ku yeesho dadka, wuxuu xushmeynayaa dhamaan faafaahin kasta, wuxuuna runtii doonayaa inuu guuleysto”.
“Wuxuu la kulmaa dhaleeceen ah garoonka banaankiisa, hadana waa diyaar marka uu kulan kasta bilaawdo”.
Intaas kadib tababare Solskjær ayaa wuxuu ka hadlay wararka ku aadan in Pogba uu si weyn ugu waalan yahay baraha bulshada wuxuuna yiri:
“Baraha bulshada waa qeyb ka mid ah casrigan aynu ku noolnahay, waxaan leenahay sharciyo quseeya, wax dhibaato ahna kuma qabo”.
"Wuu soo laabtay BOQORKA/THE KING IS BACK.".